Dagaal ka dhacay Muqdisho | maakhir.com
October 22, 2007 in Somalia | Tags: Ethiopia, Mogadishu, Somali, Somalia
Dagaal socday muddo laba saac iyo bar ah, ayaa galabta wuxuu ka dhacay xaafadda Suuqa Xoolaha ee magaalada Muqdisho.
Waxaa isaga horyimid ciidamada Itoobiya iyo xoogag ka soo horjeeda oo diidan joogitaankooda Muqdisho.
Wuxuu dagaalku bilowday markii ciidamo Itoobiyaan oo dhex lugaynayay Suuqa xoolaha oo ku sii jeeday Xerada Maslax oo saldhig u ah lagu weerar bombooyinka gacanta, baasuukayaal iyo rasaas ka soo dhacaysay meelo durugsan, waxay iyaguna jiha kasta u fureen rasaas culus.
Xilliga dagaalku bilowday, ayaa ahayd waqti suuqu uu ahaa mid mashquul ah markaasi oo dadku ay si dhaqso ah suuqa u baneeyeen, iyadoo laba ka mid ah dadka rayidka ah dhinteen, laba kalena ay ku dhaawacmeen rasaastii la is waydaarsanayay.
Dadgoobjoogayaal, ayaa BBC-da u xaqiijiyay in ay arkeen ilaa afar askarta Itoobiya ah oo Mayd ah iyo kuwo kale oo dhaawac uu soo gaaray.
Ciidamada Itoobiyaanka, waxaa markii dambe soo gaaray kolonyo baabuur gurmad ah oo ka yimid dhinaca warshadda Maslax, iyo kuwo kale oo ka soo baxay Warshadii hore ee Baastada, waxayna isku xirmeen inta u dhaxaysa labada warshadood.
Ilaa fiidkii, ayaa la maqlayay rasaas goosgoos ah, inkastoo dagaalka xoogiisii uu istaagay.
Waa weerarkii labaad oo muddo afar iyo labaatan saac gudahood ah, oo weerar culus lagu qaado ciidamada Ethiopia.
Weerarkii hore ee lagu qaaday ciidamada Ethiopia, waxaa ku dhintay lix askarta Ethiopia ah iyo sagaal qof oo rayid ah, oo ay ka mid ahaayeen shan qof oo ka shaqaynaysa garaash dhuxusha lagu dajiyo.
waxaandoonayainlay gu sooshubo emailkayga sawiro tariikhda soomaaliyaku saabsaniyo muqdisho waqtigii beri simadka iyo hada …
land line tel:850889
« Battle follows Mogadishu ambush
Prize to honour Africa statesman »